Ny Herinandron’ny blaogy Kiswahili · Global Voices teny Malagasy
Ny Herinandron'ny blaogy Kiswahili
Voadika ny 18 Oktobra 2018 8:30 GMT
Ombivavy, olombelona ary rameva – Ranomasimbe Indiana, Tanzania avy amin'i Michuzi
Manambara ireo tarehimarika ofisialy ao Tanzania sy any an-kafa fa tamin'ny 1964, nikambana mba hamorona ny Repoblika Miray an'i Tanzania i Tanganyika sy Zanzibar . Tena nisy marina ve izany? Aiza no misy ny antotankevitra niandohana ho an'ireo Toko sy andininy momba ilay Firaisana? Manontany i Mwandani . Vao haingana, nitory ny Lehiben'ny Fampanoavana ao Zanzibara, Idd Pandu Hassan, ny Zanzibara 10 mba hahazoana ilay Toko sy andininy miresaka ny Firaisana. Nahataitra Tanzaniana maro, nanambara ilay Lehiben'ny Fampanoavana tao anatina fanehoana fanoherana fa tsy any aminy ireo Toko sy andininy mikasika ny Firaisana. Tsy fantany ihany koa hoe iza no mitàna azy ireo.
Maka indray ilay resabe momba ilay Firaisana, nanapa-kevitra ny hamoaka lalao an-tsehatra iray Safari ya Mashua momba ny firaisan'i Tanganyika sy Zanzibar ao amin'ny blaoginy i Kasri la Mwanazuo. Voalohany amoahan'ny blaogera Kiswahili lalao an-tsehatra izany. Ny tononkalo sy tantara fohy no be mpanao.
Mitovy aminy ve ilay sata vaovao ao Dodoma ho an'i Mwalimu Nyerere, ilay Filoha Voalohany ao Tanzania ? Hoy i Miruko manontany, mpanao gazety monina ao Dodoma, Tanzania. Mihevitra ny iray amin'ireo mpamakiny fa sata mitovy amin'i Kim II Sung ilay izy, izay natao tany Korea Atsimo.
Nanatevin-daharana ny Mawazo na Mawaidha ny blaogera Kenyana iray, i Dollars4U, izay hany blaogera kiswahili tokana hatreto ao amin'ny tontolon'ny blaogy kenyana andalam-pivelarana. Na izany aza blaogera miteny tenim-pirenena roa i Dollars4U, tsy mitovy amin'i Mawazo na Mawaidha. Manoratra amin'ny teny Anglisy sy Kiswahili izy. Vao haingana, namoaka horonantsary fanadihadiana fohy izay manasongadina ireo Afrikàna Tatsinanana mpikaroka amin'ny oniversite malaza izy, Alamin Mazrui, Prof. Ali Mazrui,, ary i Ngugi wa Thing’o miresaka momba ny dikan'ireo tenim-pirenena Afrikanina.
Natao tao Addis Abeba, Etiopia tamin'ny volana Oktobra lasa teo ny Fivoriana faha-7 iraisampirenena mikasika ny Tenim-pirenena sy ny Fampandrosoana. Manohana ny hevitra natolotra nandritra ilay fivoriana i Mwandani hoe manaratsy ny fahombiazana ara-pianarana ao Afrika Atsimon'i Sahara ny fanabeazana amin'ny teny Eoropeana.
Raha toa ka mihevitra ny fampiasana ny teny Kiswahiliana ho fitaovana fanafahana ny habaky ny serasera tsy ho ambany ziogan'ny fanjanahana ireo blaogera Kiswahili, manoratra lahatsoratra misongadina ao amin'ny Pambazuko izay manao fanamby amin'ireo blaogera kiswahili mba, voalohany indrindra, ”hanafaka amin'ny fanjanahan”ny teny Arabo ny tenim-pirenena.
Zava-dehibe amin'ny fahaveloman'ny tenim-pirenena Afrikanina ny Aterineto, hoy i Mwandani taorian'ny namakiany ity lahatsoratra ity. Nanampy ny Kiswahili hahatratra ny fotoanany voafaritra ve ny Aterineto? (isaorana i Mawazo sy i Mawaidha tamin'ilay rohy)
Manoratra mikasika ny fanambaràna vao haingana nataon'ny filoha Tanzaniana, i Benjamin Mkapa, izay manafika ny haino aman-jery tandrefana i Dira Yangu .
Miantso ny Filoha Ogandey, Yoweri Museveni, ho ”Mpanjaka” i Nyembo . Nanapa-kevitra tamin'ny fomba ofisialy ny hirotsaka ho fifidianana indray taorian'ny fanitsiana ny lalàm-panorenana tany am-piandohan'ity taona ity izy, izay nanome alalana azy hirotsaka hofidiana fanitelony indray. Miantso azy hoe ”Mpanjaka” i Nyembo. Niezaka kanefa tsy nahavita nanitsy ny lalampanorenany mba hirotsahana fanintelony ny Filoha Afrikanina teo aloha toa an'i Bakili Muluzi avy ao Malawi sy i Frederick Chiluba avy ao Zambia. Nosamborina ary nampangaina ho namadika sy nanolana i Dr. Kiiza Besigye, ilay tena mpifaninana fototra tamin'i Museveni. Niverina avy tany amin'ny sesitaniny tao Oganda izy tamin'ny volana Oktobra farany teo.